WBOn qabsoo bilisummaa Oromoo dandammachiisaa jira!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsWBOn qabsoo bilisummaa Oromoo dandammachiisaa jira!!
Ummatni Oromoo fi Oromiyaan qabsoo bilisummaatti jiraachuun ifaa dha. Qabsoon bilisummaa ammoo kan injifatnoon xumuramuu danda’u jaarmiyaa jabaa, humna waraanaa jabaa fi tokkummaa ummaataan yoo geggeeffame malee akka hindanda’amne oduu fi seenaa qofaa irraa osoo hintaanee qabsoo bilisummaa waggootii 50n dabran geggeessaa jiru irratti ummatni Oromoo qabatamaan mirkaneeffatee jira.
Siyaasni biyya Itiyoophiyaa laaqamaa fi akkaan rakkisaa ta’uu isaa irraa kan ka’e ummatni Oromoo bal’aa fi humnootni siyaasaa Oromoo haga har’aatti mul’atan siyaasaa warri habashaa biyyattii dhuunfatanii abbaa itti ta’anii turuuf shira siyaasaa xaxan keessatti qoqqdamuun qabsoon bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaa jabeeffachuudhaan humna waraana isaa irroomfatee injifatnoo gonfachuu dadhabee har’a ga’ee jira.
Keessumaa ummatni Oromoo, Qeerroo fi Qarreen Oromoo qabsoo wal irraa hincitne waggootii 7n, 2011 irraa haga 2017tti wareegama guddaa itti baasee geggeesseen mootummaa EPRDF jilbeenfachisuun ni yaadatama.
Garuu sababa shira siyaasaa habashootaan liqimfameef injifatnoon silaa galmeessuu malee harkaa butame. Akka kanaan waggootii 3n dabran balaa guddatu qabsoo bilisummaa Oromoo mudate. Hoggantootn siyaasaa Oromoo hedduu fi sabbontotni qabsaawoti Oromoo kumaatamaan lakkaawwaman mana hidhaatti gidirfamaa jiru. Sabbontotni qabsaawotni Oromoo hedduunis humna waraanaa fi poolisoota mootummaa Abiy Ahmediin ajjeefamanii jiru.
Garuu jabina sabboontotni qabsaawotii Oromoo hagoon, keessumaa ammoo kallachi qabsoo bilisummaa Oromoo kan ta’e WBOn murannoodhaan osoo bilisummaan Oromoo hinmirkanaa’in hinhiikkannu jechuudhaan murtii fudhataniin qabsoon bilisummaa Oromoo dandammatee ummatni Oromoollee shira siyaasaa habashoootaan xaxame keessaa cabsatee bahaa jira.
Kanaafuu carraa argame kanatti dhimma bahuudhaan Oromoon hundumtuu wal qoodinsa tokko malee WBO fi jaarmiyota siyaasaa isaa jabeeffatee injifatnoo gonfachuun yeroon isaa amma.
Dorgommii siyaasaa Itiyoophiyaa dhuunfatanii bituudhaaf habashooti waggootii dheeraadhaaf gochaa turanii fi ammallee itti jiran hubatamee xaxaa shira siyaasaa habashootaa keessaa ba’uuf murtii ABOn waggootii 40 dura fudhate gadi jabeessuun jaarmiyaa bilisaa fi waraana bilisummaa Oromoo(WBO) jabeeffachuu dha.
WBOf haa dirmannu!
Via: Geneti Deressa
Walgahii konyaa ABO Washington,D.C. Oromia News Network - ONN was live. Sagalee Bilisummaa Oromoo